218 Ruux oo ku dhimatay Weeraradii Sri Lanka. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
218 Ruux oo ku dhimatay Weeraradii Sri Lanka.
On Apr 22, 2019 268 0
Waxaa sii kordhay khasaaraha ka dhashey weeraro waaweyn oo maalintii shalay ka dhacay magaalada caasimadda u ah Sri Lanka ee lagu magacaabo Kolombo.
Weerarada ayaa gaaraya illaa iyo 8 weerar oo qaraxyo loo adeegsaday, waxaana lagu qaaday kaniisado, iyo hotello ku yaala magaalada caasimadda ah, iyadoona mid kamid ah qaraxyada uu ka dhacay meel u dhow guriga ra’iisul wasaaraha dalka.
Ugu yaraan 215 ruux ayaa ku dhimatay qaraxyadan, halka inkabadan 400 oo ruuxna ay dhaawacmeen, waxaana dadka dhintay ku jira ugu yaraan 35 ruux oo kasoo jeeda wadamada Maraykanka, Shinaha, Denmark, Japan iyo kuwa kale.
Dowladda Sri Lanka waxay weerarka ku tilmaamtay waxa loogu yeero “weerar argagaxiso” oo ay fuliyeen Jamaacaad xagjir ah, waa sida ay hadalka u dhigtaye, iyadoona intaa ku dartay iney warbaahinta la wadaagi doono natiijada kasoo baxda baaritaan socda.
Ra’iisul wasaaraha Sri Lanka ninka lagu magacaabo Ranial wuxuu sheegay in dowladdu ay heshey digniino sheegaya suurtagalnimada weeraro waaweyn, balse wuxuu carabka ku dhuftay ineysan qaadan feejignaantii la rabay.
Sri Lanka waxay soo rogtay bandow soconaya 12 saacadood oo xiriir ah, waxaana hawada laga saaray baraha bulshada ee Internetka, iyo adeegyada fariimaha la isugu diro.
Kaniisadda Vaticanka oo ay kasoo jeedaan badi dadka shalay lagu laayay Sri Lanka ayaa bayaan ay soo saartay waxay ugu tacsiyeysay dadka looga dilay wadankaas.
“Waxaan jeclahay inaan tacsi u diro mujmataca Kirishtanka ah ee la beegsaday” ayaa lagu yiri qoraal kasoo baxay Bobka Vaticanka, kaas oo lagu baahiyay barta rasmiga ah ee kaniisaddu ay ku leedahay Internetka.
Qaar kamid ah dowladaha caalamka ayaa ka cambaareeyay silsiladaha weeraradii shalay ruxay Sri Lanka, waxaana kamid ah dowladda Maraykanka, oo uu wasiirkeeda arimaha dibadda shaaca ka qaaday in dad Ameericaan ah ay ku jiraan boqollaalkii ruux ee ku dhintay Sri Lanka.
Weli majirto cid si rasmi ah u sheegatay masuuliyadda weeraradan, waxaana wadamada qaarad u ekaha hindiya jamaacaad Jihaadi ah oo dhowr ah.